माग बढ्दै ‘पुना’ब्राण्डको स्किन केयरको – YesKathmandu.com
भनिन्छ सुन्दरता नै नारीको गहना हो । सुन्दर हुने रहर कस्लाई हुँदैन ? उसो हो भने प्रथम मिस नेपाल रुबी राणको रोजाईको पुना व्राण्डका क्रिम प्रयोग गरी तपाईको मुहारमा पनि रुबी राणाको झै चमक र आत्मविश्वाश किन नल्याउने ?
के हो पुना ?
नेपाली बजारमा देखिने भन्दा भिन्नै प्रकारका क्रिमहरु मध्य यो फरक प्रकारको क्रिम हो । पुना न्युजिल्याण्ड बेस कम्पनी हो । महाराजगञ्जमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको पुनाले हाल तीन प्रकारका क्रिमहरु बजारमा ल्याएको छ । ‘पुना एन्टि एन्जिन एण्ड एन्टि व्रिकलेस,एन्टि एक्नि पिल अफ मास,वाइटनिङ एण्ड मोस्टुराइजिङ पिल अफ मास्क’नामक तीन प्रकारका क्रिम बजारमा विक्री वितवरण गर्दै आइरहेको छ ।
यस्का उत्पादन अन्य क्रिमहरु भन्दा निकै भिन्न रहेको प्रथम मिस नेपाल राणाको भनाई छ । उनी भन्छिन ‘आफ्नो सुुन्दरतालाई बचाइ राख्न चाहनेले पुना क्रिम प्रयोग गर्नै पर्दछ । पुना व्राण्डका क्रिमले अनुहारका डण्डिफोर हटाउने दावी राणाको छ ।
व्राण्ड एम्बेसडर रुबी राणा
‘३० नोबेम्बरसम्मका लागि छुटसहित ५ सय ९९ मात्र ।’ प्रथम मिस नेपाल रुबी राना आफ्ना कस्टुमरसँग पुना स्किन केयरको मुल्य बताइरहेकी थिइन । रातोपुलमा रहेको युनाइटेड फिटनेसमा रुबी राणा ‘पुना’ब्राण्डको लोगो अंकित कालो टिर्सटमा झुल्किइन । आगामी महिना हुन लागेको मिस लिम्बु प्रतियोगिताको सह प्रायोजक समेत रहेको पुना स्किन केयरको लोगो अंकित कालो टिर्सटमा खुलेकी रुबीलाई एस काठमाडौं प्रतिनीधिले रातोपुलमा रहेको युनाइटेड फिटनेस सेन्टरमा भेट्यो । पुना स्किन केयरको माग अहिले जिल्ला जिल्लामा समेत बढेको उनले सुनाइन । आगामी दिनमा एजलेस सिरिज,एन्टि एक्नि सिरिज,स्किन व्हवाइटनिङ सिरिज नेपाल भित्राउने योजना रहेको पुना कम्पनीका विदुर राज जोशीको भनाई छ ।
यसरी जुटे भिभिआईपीहरु बाग्मती सफाईमा
भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिएको छः राजदुत रे
युवाहरुको पहलमा ताङ्जो माहाकाल धार्मिक संरक्षण समिति गठन
नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो, पपुवा न्युगिनीलाई ब्याटिङको निम्तो